Inona no hatao raha bobongolo ny gorodona? - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Inona no hatao raha bobongolo ny gorodona?
Ahitsio: Denny　2020-03-02　Mobile
Voalohany, inona ny fanitsiana ho fanarenana matevina vita amin'ny hazo?
Atsofohy amin'ny fitrandrahana mafana amin'ny 1: 3 ny fampihenana ny fifantohany.Asary aorian'izay ny menaka dia asio lamba manala malemy hodiovina. Raha niditra ny gorodona ny hazo matevina dia tsara kokoa ny hanala azy io ary hisorohana ny fiantraikany amin'ny gorodona mivaingana.
Faharoa, ny fomba fikojakojana ny tany
1. fepetra raisina
Rehefa manadio ny gorodona vita amin'ny rano isan'andro dia tsy maintsy mitandrina ny fihazonana azy io ho madio sy hadio.Ny tokony hanakana ny tany tsy hosasana rano be dia be ianao koa dia tsy maintsy misoroka ny fampiasana ranon-tsolika toy ny rano azon'ny alkaola sy savony rano madio hanadio ny gorodona ary hisorohana ny fanimbana ny sary hoso-doko amin'ny gorodona hazo. Mampiasà lamba famaohana lamba na lamba famaohana handoanana azy io.Raha sendra misy maloto sarotra aminao ny manala azy dia eritrereto ny fampiasana volon'ondry vy mba hikosehana moramora azy mba hisakanana azy tsy hitotoana be loatra na rano mafana loatra. Ny fikolokoloana isan'andro dia tokony hatao hisorohana ny vovoka any ivelany hanidina ny efitrano faran'izay tratra, ary ny varavarankely dia tokony hikatona ara-potoana mba hisorohana ny hamandoana.
2. Fomba fikojakojana
Ilaina ny manao fikojakojana ny gorodona vita amin'ny fotoana, tsara kokoa ny manisy savoka indroa isan-taona.Mety manome antoka izany fa ny sary hoso-doko amin'ny gorodona vita amin'ny hazo dia malefaka ary afaka mandrakotra ny gorodona, mahatonga ny gorodona vita amin'ny hazo ho lasa vita sy tsara tarehy. Ao anatin'ilay fomba famafazana dia azonao atao ny manasa lamba manasa maina mba hamafa aloha ny gorodona aloha, ary avy eo ampiharoina ny savoka.Mampamao ny savoka ary ataovy azo antoka fa hoesorina avokoa ny toerana rehetra aorian'ny fanamainana, mamafazo ny gorodona ho any amin'ny tany miaraka amin'ny lamba malefaka maina. Dia milamina sy tsy misy dikany izany.
Ny gorodona vita amin'ny hazo dia atolotra mba hapetraka ao amin'ny efitrano iray tsy misy tara-pahazavana mivantana, satria ny sary mihetsika dia hiteraka famoretana sy fahanterana raha efa hita taratra mandritra ny fotoana maharitra. Raha napetraka ny rihana hazo amin'ny fahavaratra, dia tsarovy ny manokatra ny varavarankely ary mitazona ny rivotra vaovao ao anaty efitrano mba hisorohana ny hamandoana ao anaty efitrano tsy hiteraka olana miolakolaka sy toy ny tile. Manokana ny trano fidiovana sy ny gorodon'ny efitrano, raha tsy izany, ny gorodona dia mora mamolavola, izay misy fiantraikany amin'ny fiainana ny serivisy.
Inona no hatao raha bobongolo ny gorodona? Ny atiny mifandraika